U-Blanchy's Escape to the Country Stay
Gloucester, New South Wales, i-Australia
Indlu encane ibungazwe ngu-Carmen
Ngikhokhise u-$160 phakathi nezinsuku/ubusuku kanye no-$170 ngezimpelaviki/ubusuku ngikhipha imali yokusingatha futhi i-airbnb ikhokhisa imali yesevisi yesivakashi ephezulu ngakho-ke ungabhuki uma ingaphezu kwamandla akho njengoba ngingazifaki kimi le mali.
Lokhu kuguqulwa kwegalaji kuyindida kakhulu futhi ingaphakathi eliphefumulelwe nge-boho lingahlalisa abantu abangafika kwabangu-2 futhi lisanda kulungiswa kule nyanga zingama-26 Novemba2021. Sicela upheqa izithombe futhi ufunde izincazelo ngaphambi kokubhuka. Ngiyabonga 😊
Sinegumbi lokulala elilodwa elinombhede olingana nendlovukazi nendawo eningi yokuhlala ukuze ujabulele ukubukwa ngaphandle kanye nokuphumula nje endlini. Igumbi lokugezela elikhulu. Indawo yokudlela. Izinsiza zokupheka eziningi njengezitofu zegesi, ihhavini legesi, i-microwave, i-toaster yesinkwa, igedlela, i-rice cooker, amapani kagesi, isiqandisi, umshini wokucindezela amasemishi kanye nesithombo somoya.
Umfula i-Barrington ungamamitha angu-600 kuphela ukusuka ekhaya lapho ungajabulela khona ukubhukuda noma ukwethula isikebhe, i-kayak noma ukubamba inhlanzi. Futhi umgwaqo othule wokuhamba ngezinyawo noma ukugibela ibhayisikili.
Sesikuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya elokishini elihle laseGloucester lapho kunezitolo eziningi zekhofi namabhodlela, izitolo ezinkulu, amakilabhu ezokungcebeleka, izindawo zokucima ukoma nokunye.
Siseduze nePublic Park embalwa okuhlanganisa neBillabong Park okuyiyona edume kakhulu. Sinombukiso we-Gloucester njalo ngoMashi, uMkhosi we-Chill Out njalo ngoJulayi kanye ne-Farmer's Market njalo ngeSonto lesibili lenyanga futhi uma unenhlanhla ungase ubone ukuwa kweqhwa e-Barrington Tops noma e-Gloucester Tops ngezikhathi zasebusika.
Ngizobe ngingekho ucingo uma ningidinga noma yini.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-12154-2
Hlola ezinye izinketho ezise- Gloucester namaphethelo